TunnelBear VPN v169 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း v169 လြန္ခဲ့ေသာ4ပတ္က
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား TunnelBear VPN
TunnelBear VPN ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
TunnelBear VPN ကိုသိုသိုသိပ်သိပ်နှင့်လုံခြုံစွာအင်တာနက်ကို browse တစ်ဦးအခမဲ့, မယုံနိုင်လောက်အောင်ရိုးရှင်း App ဖြစ်ပါတယ်။
လှပတဲ့ TunnelBear app ကိုသင်၏အွန်လိုင်း privacy ကိုကာကွယ်ပေးသည်သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်များ & apps များရယူနှင့်အများပြည်သူ Wi-Fi ဟော့စပေါ့ပေါ်တွင်သင်၏ဆက်သွယ်မှုလုံလုံခြုံခြုံပေးနိုင်ပါတယ်။
လစဉ်လတိုင်းဒေတာ browsing ၏ 500MB နှင့်အတူအခမဲ့ TunnelBear ကြိုးစားပါ။ အဘယ်သူမျှမခရက်ဒစ်ကဒ်လိုအပ်သည်။ သငျသညျန့်အသတ် data ကိုပေးသောပရီမီယံအစီအစဉ်များများအတွက်ရရှိနိုင် in-app ဝယ်ယူမှု။
ရိုးရှင်းစွာ ထား. , TunnelBear ကို အသုံးပြု. , သင်သည်သင်၏အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုဟက်ကာများ, ISP များအားနှင့်ကြော်ငြာရှင်များအနေဖြင့်ပိုပြီးပုဂ္ဂလိကကြောင်းကို သိ. ဘယ်နေရာမှာမဆိုစိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်အထဲကနေ browse နိုင်ပါတယ်။
ပုံ TUNNELBEAR အလုပ်လုပ်ပါသလဲ
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုအရွက်အတိုင်း Android အတွက် TunnelBear VPN ကိုသင်၏ဝဘ် browsing နဲ့ data တွေကို encrypt ပြုလုပ်ပေးသည်တကယ့်ရိုးရှင်းတဲ့ app ကို (ကဖတ်လို့မရအောင်အောင်) ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအများပြည်သူသုံး Wi-Fi ကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာနဲ့လုံခြုံစေသည်များနှင့်လည်း ISP များမှထံမှပုဂ္ဂလိကသင့်ရဲ့ browsing အတွက်စောင့်ရှောက်။ Website များနှင့်ကြော်ငြာရှင်များကအင်တာနက်ကိုဖြတ်ပြီးသင့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာနဲ့ browsing အတွက်ခြေရာခံတစ်ဦးထက်ပိုခက်ခဲအချိန်ရပါလိမ့်မယ်။
ပုံ TUNNELBEAR ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သလဲ
သင့်ရဲ့ကြည့်ရှုခြင်းအလေ့အထပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်ကြပြီးရုံမည်သူမဆိုမှယုံကြည်စိတ်ချရမရသင့်ပါတယ်။ TunnelBear လွတ်လပ်စွာတစ် 3rd ပါတီစာရင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီးသောကမ်ဘာပျေါတှငျပထမဆုံးနှင့်တစ်ခုတည်းသော VPN service တစ်ခုဖြစ်ဂုဏ်ယူသည်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့သင့်ရဲ့ဒေတာလုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောအပေါ်ကယ်နှုတ်တော်မူကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချမှုခံစားရနိုင်ပါတယ်။
one-ကိုထိပုတ်ပါချိတ်ဆက်: App ကိုနိုင်အောင်ရိုးရှင်းတဲ့တစ်ဦးဝက်ဝံအသုံးပြုရန်နိုင်ဘူး။
တစ်ဦးက VPN ကိုသင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်တစ်တင်းကျပ်မသစ်ထုတ်လုပ်ရေးမူဝါဒအနှင့်အတူကျွန်တော်တစ်ဦး 3rd ပါတီ, ပြည်သူ့လုံခြုံရေးစာရင်းစစ်ပြီးစီးခဲ့ပါပြီဖို့သာစားသုံးသူ VPN ကို app ကိုပါပဲ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ VPN ကိုကွန်ယက်ကို: 22+ နိုင်ငံများတွင်ဆာဗာများနှင့်လျှပ်စီး-အစာရှောင်ခြင်းအမြန်နှုန်းနှင့်အတူ, သင်နှစ်သက်သောကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ apps များရယူသုံးပါ။ အချိန်မရွေး, ဘယ်နေရာမှာမဆို။
Grizzly-grade ကိုလုံခြုံရေး: TunnelBear ပုံမှန်အားဖြင့်ခိုင်မာတဲ့ AES-256 bit encryption ကိုအသုံးပြုသည်။ အားနည်း encryption ကိုတောင်မှတစ် option ကိုမဟုတ်ပါဘူး။
အဘယ်သူမျှမသစ်ထုတ်လုပ်ရေး။ သင့်ရဲ့ browsing အတွက်ပုဂ္ဂလိကရှိနေမည်။
အမြဲ 24 နာရီအတွင်းတုံ့ပြန်ကြောင်းအထောက်အကူပံ့ပိုးမှု။
"TunnelBear ကိုသင်လုံခြုံစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ကြော့, လွယ်ကူသောမိုဘိုင်း VPN ကိုပါပဲ။ "
"ဒီ app ကိုကျက်သရေတွေနဲ့စိမ်းဖြင့်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်လည်းကောင်းတစ်ဦးစျေးနှုန်းမှာလုံခြုံရေးကယ်တင်တတ်၏။ "
ON "သင်ပြုသမျှအားလုံးသည်ဖို့ switch ကို turn ဖြစ်ပါတယ်" "သင်ကကာကွယ်ပေးနေကြတယ်။ "
- နေ WSJ
"TunnelBear, လူတိုင်းအတွက်အွန်လိုင်း privacy ကိုရောက်စေဖို့လိုလားကြောင်းအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ VPN ကို app ကို။ "
TunnelBear VPN အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
TunnelBear VPN အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
TunnelBear VPN အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
TunnelBear VPN အား အခ်က္ျပပါ
sandro797 စတိုး 96.51k 37.26M
TunnelBear VPN ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း TunnelBear VPN အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း v169
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.tunnelbear.com/privacy-policy/
App Name: TunnelBear VPN
Release date: 2019-05-19 08:51:15
လက်မှတ် SHA1: A6:0C:A9:87:76:FC:BF:26:19:AB:CA:20:DE:05:B1:EE:A0:48:0E:83
ထုတ်လုပ်သူ (CN): TunnelBear
TunnelBear VPN APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ